Hiob 40 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yehowa bisaa no nsɛm foforo (1-24)
Hiob gye toom sɛ onni hwee ka (3-5)
“Wubetumi anya asɛm aka wɔ m’atɛntrenee ho anaa?” (8)
Onyankopɔn kaa sɛnea Behemot wɔ ahoɔden (15-24)
40 Yehowa toaa so bisaa Hiob sɛ: 2 “Obi a ɔhwehwɛ mfomso betumi ne ade nyinaa so Tumfo no aham anaa?+ Ma nea ɔpɛ sɛ ɔteɛ Onyankopɔn no mmua.”+ 3 Ɛnna Hiob buaa Yehowa sɛ: 4 “Hwɛ! Memfata.+ Ɛdɛn na mede beyi wo ano? Mede me nsa ato m’ano.+ 5 Makasa pɛnkoro, na merenkasa bio;Makasa mprenu, na merenka hwee bio.” 6 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Hiob wɔ ahum no mu sɛ:+ 7 “Yɛ krado sɛ ɔbarima;Merebebisa wo nsɛm bi, na woayi me ano.+ 8 Wubetumi anya asɛm aka wɔ m’atɛntrenee ho anaa?* Wubebu me fɔ na ama woadi bem?+ 9 Wowɔ basa a ahoɔden wom te sɛ nokware Nyankopɔn no,+Anaa wo nne betumi abobom te sɛ ne nne?+ 10 Fa anuonyam ne kɛseyɛ hyehyɛ wo ho;Fa nidi ne ahoɔfɛ fura. 11 Yi abufuw kɛse a ɛwɔ wo mu no nyinaa bra;Hwɛ obiara a ɔyɛ ahantan na brɛ no ase. 12 Hwɛ obiara a ɔyɛ ahantan, na gu n’anim ase,Na tiatia abɔnefo so wɔ baabi a wogyina. 13 Fa wɔn nyinaa sie mfuturu mu;Kyekyere wɔn* wɔ ahintawee mu, 14 Na anka me koraa mɛka akyerɛ wo*Sɛ wo nsa nifa betumi agye wo. 15 Hwɛ Behemot.* Me na meyɛɛ no, ɛne wo nyinaa. Ɔwe wura sɛ nantwi. 16 Hwɛ ahoɔden a ɛwɔ n’asen mu,Na hwɛ n’ahoɔden a ɛwɔ ne yafunu ntini mu! 17 Ɔma ne dua mu yɛ den sɛ sida dua;Ne srɛ mu ntini abobare ho. 18 Ne nnompe te sɛ kɔbere dorobɛn;Ne nan te sɛ dade. 19 Onyankopɔn nnwuma nyinaa mu no, biribiara ne no nsɛ;*Ne Bɔfo no nko ara na obetumi de ne sekanakɔ no so. 20 Mmepɔw so na onya n’aduan;Ɛhɔ na wuram mmoa nyinaa di agoru. 21 Nsɔe nnua ase na ɔda,Demmire* nwini ne asaase a nsu taa so so* na ɔte. 22 Nsɔe nnua ma onya onwini,Na obon ano nnua twa ne ho hyia. 23 Asubɔnten rebu fa so denneennen mpo a, ne ho mpopo. Sɛ Yordan+ yiri sram so mpo a, onsuro. 24 Sɛ n’ani gu so a, obi betumi akyere no anaa?Na obi betumi de darewa* awura ne hwene mu?
^ Anaa “Wubetumi aka sɛ mibu atɛnkyea anaa?”
^ Nt., “wɔn anim.”
^ Anaa “mɛkamfo wo.”
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ susono.
^ Nt., “ɔno na odi kan.”
^ Anaa “ɔwora mu.”
^ Nt., “afiri.”